आहा बिचार Archives - Page3of 12 - AahaSanchar
Home आहा बिचार (Page 3)
बृद्ध बालख : ह्याँती गर्ने कुरा
एमएल ओली उमेरले डाँरो काट्याता पनि कारणले तन्नेरी बनाल्च । उइछारी राजनीतिक भाषामा युवा, दर्शनको भाषामा दार्शनिक र गँवाल्या भाषामा बुरेयौली भइयाता पनि सुर्रिने बेला भर्कल फक्र्याछन् । यो अवसरको परिपाटी जुराउनु हुने तल्लोदेखि उपल्लो तसम्मका सप्पैलाई भित्रैदेखि भाइरैसम्म हार्दिक धन्यावात छ । उतिबेला नइयाँ जोसका साथ त्यो पेशामा पस्सियो…
एक पछि अर्को युवाको आशा मर्दैछ देशमा
हरि जिज्ञासु देशमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको मनमा नैरास्यता छाउँनुको कारण एउटै मात्र छ त्यो हो देशमा असल सुशासन नहुँनु । कुनै पनि देशमा राजनीतिक साझेदारी सहितको असल कानून भएन भने त्यो देशमा भ्रष्टचार, हत्याहिंसा, बलात्कार, बेरोजगारी लगायतका रोगहरुले जरा गाड्न थाल्छ । अहिले हाम्रो देश पनि फितलो कानूनले गर्दा…
मेगराज खड्का साता अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा मैले मेरो अध्ययन तथा रिपोटिङ प्रयोजनका लागि सूचना माग गर्न गए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना मागको निबेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई बुझाए । सूचना मागको निबेदनमा तोक लगाउदै उक्त बिभागका कर्मचारीलाई प्रजिअले भन्दै थिए यो सूचना मागको…
एमएल ओली पत्तै नभइकन कोबेला पैदा भइयोछ । भर्कलै बाल, अघेल्लो साँज सुत्याउ मान्स बिउँतिदा, त्यो जर्मिकन, छ्याल्ल–ब्याल्ल भइकन, सालनाल गलाइकन, न्वारानै भइयोछ भन्नु हुन्च । कम्सइकम त्यो चालपाउ भया बधाई र शुभकामना भन्नित्यो होला । पैलै दिने हो र लोब्ले हुनखान द्या भन्नु । माँज्जो होला र लग्गन पछ्या…
स्थानीय सरकारले अपनाउनुपर्ने मिडिया नीति
मेगराज खड्का देशको शासन प्रणालीमा परिवर्तन आएसगै मिडिया नीतिमा पनि परिवर्तन आउने गरेको छ । जति लोकतान्त्रिक शासन व्यवयस्था स्थापित हुन्छ त्यति संचार फराकिलो हुन्छ भने निरङकुश शासन व्यवस्थामा संकुचित हुन्छ । बेला बेला हुने शासन तथा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा मिडिया क्षेत्र तारो पनि बनिरहेका हुन्छ । शासन व्यवस्थाको पक्षधरले…
तर्सो : ह्याँती गर्ने कुरा
एमएल ओली ह्याँती न ह्वाँती भन्ने मुख्खैती हो । एक्कै घरन्वा बल्दहरू मिर्याउ कत्ति स्वाउछैन । स्वाव्वई पनि कस्तोरी बाबै ? आजसम्म एउटै भकार्नु खायापिया, नाँच्याखेल्या र हुक्र्याबर्या । कुर्रै गर्ने हो भन्या बा सक्यात नभया पनि माता सक्यातै हुन क्यारै । त्यो किल्ली देख्ता सिल्लीलाई पनि बैराक लाउ हुनुपर्च…
एक काम दुई पन्त : ह्याँती गर्ने कुरा
एम एल ओली ढाँट्याउ भइया भन्नु, उइल फुर्नु तम्मी हाम्रा पालिनु फलामे धेल्लो, फलामे दरबाज्जा, फलामे गेट आदि क्याक्या भनिन्त्यो क्याक्या । सुनिन्त्यो, तेल्लाई कोले खोल्न सक्तो र ? बल्याबाङ्ङाले मात्र खोल्न सक्चन् । लुत्तिचाम्र्यायौं काम्मै छैन भनिन्त्यो । त्यस्ता कुर्राकान्नी सुन्ने यिनी आफ्नै कान सँच्ची छन् । अइचेल ता…
डिकेन्द्र शाह “पूरानो कोट लगाउ, नयाँ पुस्तक किन ।”महान् दार्शनिक,शिक्षाविद् थोरोको भनाईले पुष्टि गर्छ कि शिक्षा विनाको मानव जीवन अन्धकारमय छ । मानिलियौँ,कुवाको भ्यागुतोझैँ अशिक्षित मान्छेको जीवन पनि चल्छ होला सायद । शिक्षा भन्नाले व्यक्तिमा रहेका अन्र्तनिहित प्रतिभाहरु,क्षमताहरु बाहिर ल्याउने माध्यम नै बुझिन्छ । भलै शिक्षाका परिभाषाहरु विद्वानहरुले विभिन्न कोणबाट…
एमएल ओली जर्गतैले सप्याउ भनिकिन सन्र्नी गर्दा थोरै खुशी लाग्दो र ? हुतिहार कोइलाई ह्वाँ आँख्खि दिक लाउहोला । सप्र्या मुहारमा धुइसो पोत्न, कोत्तरकात्तर पार्न, लर्छारपर्छार पार्न, फुटालफाटाल पार्न, खोज्नेहरू कम्ता छन र ? मर्याउ बिरालो पालिकिन जिउदा मुसा तर्साउन खोज्ने छुल्याहरुवा राँन्नो बाँन्नोले हुक्कै मात्र होला र दिक्कै बनाल्च…
वर्ग संघर्षको लागि क्रान्ति निरन्तर
डिकेन्द्र शाह समाजमा जहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । जहाँ छलकपटको राजनिति हुन्छ,त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ । जहाँ हिँसारहित शान्ति हुन्छ,त्यहाँ त्यो समाज,देशको उन्नति प्रगति हुन्छ । संसार परिवर्तनशील छ । शासन व्यवस्थाको उल्टापालटी गरिने प्रयास,शासन व्यवस्थामा हुने आमूल परिवर्तन नै क्रान्ति हो । क्रान्ति एउटा परिवर्तन हो तर सबैखाले…
बिपद जोखिम न्युनिकरण सम्वन्धि तालिम
कार्कीद्धारा धुर्मुस–सुन्तलीलाई ५ लाख आर्थिक सहयोग